Uncategorized – Page2– PathivaraOnline
को'रो'ना म हा मा री केही मथ्थर भई काठमाण्डौं व्यस्त भइरहँदा बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको भने जहिले पनि अशान्त छ । म्यानपावर कम्पनीले साउदी अरेविया, कतार र दुबइमा पुयाएर आफनो छोरो, श्रीमान, भाइ, भतिजालाई अलपत्र पार्‍यो भन्ने उजुरी दैनिक दर्जन भन्दा बढी परिरहेको विभागको आंकडाले देखाउँछ । पीडित
काठमाडौ । कसैले चोरी गरेरै होटलमा विलासी जिवन बिताउँछ, फेरी फेरी होटलमा केटी पनि ल्याउँछ र चोरी गरेकै पैसाले वंगला समेत बनाउँछ भन्ने कुरा गर्दा पक्कै विश्वास नलाग्न छ । तर यस्तो घटना काठमाडौमै भएको छ । उनीहरू कोटेश्वरको एउटा गेस्ट हाउसमा बस्दथे । त्यहीँबाट चोरी गर्ने योजना बनाउँथे ।
बधाई छ – बिराटनगरबाट जितिन यी १८ बर्षिया किशोरीले प्रदेश प्रतिनिधिमा!
विराटनगर : मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ (ख) बाट नेपाली कांग्रेसको प्रदेश प्रतिनिधिमा १८ वर्षीया किशोरी चयन भएकी छिन् । १८ वर्षकी रक्षा यादव सर्वसहमतिमा प्रदेश प्रतिनिधिमा चुनिएकी हुन् । प्रतिनिधि चयन भएपछि रक्षाले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने प्रतिकृया दिएकी छिन् । अहिलेको नेतृत्वबाट देशको विकास असम्भव रहेकाले खबरदारी गर्न युवा पुस्ता राजनीतिमा
admin November 17, 2021 Uncategorized 0
काठमाण्डौं । काठमाडौँ उपत्यकामा आज यो वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागकाअनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यो वर्षकै कम सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हो । मङ्गलबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ८ डिग्री सेल्सियस थियो । चिसो बढेसँगै विभागले वायुको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम
यस्ताे छ मंसिर महिनाको मासिक राशिफल, यी राशिहरूका बीच हुनेछन् बिहेवारी… भिडियो हेर्नुहाेस्
admin November 17, 2021 November 17, 2021 Uncategorized 0
सूर्यले राशि परिवर्तन गरेको दिन सूर्योदय हुँदा बुधवार भए पनि सङ्क्रान्तिको समयमा सूर्योदय भइ नसकेकाले मङ्गलवार कै सङ्क्रान्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै राशि सङ्क्रमणको समयमा अश्विनी नक्षत्र, सिद्धि योग, तैतिल करण, आनन्दादि शुभ योग, सिंह लग्न र कन्या नवमांशक रहेको देखिन्छ । हरेक वर्ष मंसिर महिनामा श्रीसूर्यनारायणले बृश्चिक राशिमा भ्रमण
फेसबुकमा चिनजान भएपछि पहिलोपटक होटलमा पुगेर भेट्दा…
admin November 14, 2021 Uncategorized 0
सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको चिनजानपछि प्रेममा डु’बे’का किशोर–किशोरीबीचको स’म्ब’न्ध वि’यो’गा’न्त बन्दा किशोरी अस्पताल र किशोर जे’ल (सुधार गृह) पुगेका छन् । यो घटना भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित बैतूलको हो । किशोरीलाई उच्च र’क्त’स्रा’बपछि नागपुरस्थित अस्पताल भर्ना गरिएको छ । महाराष्ट्रकी १७ वर्ष ६ महिना उमेरकी एक नाबालिग किशोरी र १७ वर्ष १०
सहरी खानपानसँगै गाउँघरसम्मै पस्यो मधुमेह
टिका सानुले ‘सँसार नै छोड्न लागेको’ दुखद खबर सुनाउँदै भनिन्ः कोठामा आफैलाई थुनेर धेरै रोएँ… (भिडियो हेर्नुस)
admin November 13, 2021 Uncategorized 0
काठमाण्डाैं । टिका सानु पछिल्लो समयकी निकै नै लोकप्रिय गायिका हुन् । दाँगकी टिकाले लाईभ दोहोरी गाउँदै आफ्नो कला यात्रा थालिन् । त्यसपछिका दिनहरुमा इन्द्रेणी मार्फत अझै चर्चा पाउँदै दर्शक, श्रोताहरुको मन जिेिकी टिकाले पछिल्लो समय भने इन्द्रेणी छोडिन् । इन्द्रेणी छोडेपछि उनले दर्शकहरुबाट माया र गाली दुवै पाईन् ।
जति कोशिष गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन? एक चोटी अवश्य पढ्नुहोस्
admin November 12, 2021 Uncategorized 0
दम्पतिले चाहाँदा चाहाँदै पनि लामो समय सम्म बच्चा नहुने समस्यालाई बाझोपनाको संज्ञा दिईन्छ । हाम्रो समाजले विवाहको लामो समय सम्म पनि बच्चा जन्मिएन भने महिलालाई बाझी जस्ता अनेक लान्छना लागाउँने गर्दछन् । समाजले बच्चा नहुनुमा जहिले पनि महिलाकै समस्याको रुपमा लिन्छ । हाम्रो समाजले श्रीमान र श्रीमती कसको कमजोरीका कारण बच्चा
admin November 10, 2021 Uncategorized 0
शरणामती / झापाको झापा गाउँपालिका-६ फुलगाछीमा एक अचम्मको बच्चाको जन्म भएको छ। बुबा श्यामलाल मर्डी र आमा सिमा मर्डीको कोखबाट मंगलबार राती ११ बजे जन्मेको बच्चाको ४ वटा हात र ४ वटा खुट्टा रहेको स्थानीय मोहन पोखरेलले बताए।अनौठो बच्चाको जन्म भएपछि बुधबार बिहान देखी हेर्ने मानिसहरुको घुइँचो लागेको छ। छोराको